अमेरिका बसिरहेकी आँचल कुँवर कसरी आइपुगिन् 'दराज नेपाल' हाँक्न? :: निर्मला घिमिरे :: Setopati
दराजलाई अगाडि बढाउन के छन् उनका योजना?
नेपालमा मात्रै होइन, संसारमै इ–कमर्श क्षेत्रमा महिला सहभागिता कम छ। त्यसमाथि पनि नेतृत्व तहमा पुगेका महिला औंलामा गन्न सकिन्छन्। आँचल कुँवर तिनैमध्ये एक हुन्।
ललितपुर, सानेपाकी ३७ वर्षीया कुँवरले केही दिनअगाडि मात्रै दराज नेपालको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएकी छन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनी दराजले उनलाई दराज नेपालको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति गरेको हो। योसँगै उनी दराजको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला बनेकी छन्।
१८ वर्ष अमेरिकामा बिताएर फर्किएकी कुँवर दराजले आफ्नो अनुभव र क्षमताका आधारमा आफूलाई विश्वास गरेको बताउँछिन्।
'मैले महिला भएकै कारण काम गर्न गाह्रो वा सजिलो हुन्छ भनेर कहिल्यै सोचेकी छैन। म काममा केन्द्रित छु,' कुँवरले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'तर इ–कमर्श क्षेत्रमा विश्वभर नै महिला सहभागिता कम छ भन्ने मैले पनि बुझेकी छु।'
क्षमता र इच्छा भए जो पनि नेतृत्व तहमा पुग्न सक्ने उनी बताउँछिन्। यसका लागि आफ्नो रूचिअनुसारको काम भने छान्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
कुँवरको दराजको नेतृत्व तहसम्म यात्रा कसरी तय भयो त?
उनको परिवारमा आमा, बुवा र एक भाइ छन्। बुवा खाद्य संस्थानका जागिरे थिए। परिवारको आर्थिक अवस्था राम्रै थियो। बुवाको कामका कारण उनको परिवार पूर्वदेखि पश्चिमसम्म घुमिरहनुपर्थ्यो। बुवाको काम जहाँजहाँ हुन्छ, उनी त्यतै बसिन्। आफ्नो पाँच कक्षासम्मको पढाइ ठाउँ सर्दैसर्दै सकिएको कुँवर बताउँछिन्।
'पाँच कक्षासम्मको अध्ययन डुल्दाडुल्दै सकियो,' उनले भनिन्, 'पछि बुवा काठमाडौंमै एक दूतावासमा काम गर्न थाल्नुभयो। अनि आइडल मोर्डन स्कुलमा कक्षा छदेखि पढ्न थालेँ।'
त्यही स्कुलबाट उनले एसएलसी दिइन्। अनि माइतीघरस्थित सेन्ट जेभियर्सबाट आइएससी सकिन्। यसपछि भने उनी थप अध्ययनका निम्ति अमेरिका पुगिन्।
अमेरिकाको कार्लसन स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट गणित र अर्थशास्त्रमा स्नातक सकेपछि कुँवरले त्यहीँको कार्लसन वागोनलिट ट्राभलमा काम थालिन्। त्यहाँ उनी कार्यक्रम तथा उत्पादन व्यवस्थापनको काम गर्थिन्।
यसपछि उनी एमबिए अध्ययनका लागि मिनेसोटामास्थित सेन्ट क्लाउड स्टेट युनिभर्सिटी भर्ना भइन्।
'त्यहाँबाट एमबिए पूरा गरेपछि मलाई इ-कमर्श कम्पनी अमेजनबाट कामको प्रस्ताव आयो,' उनले भनिन्, 'अमेजनमा पनि व्यवस्थापनकै काम थियो।'
सुरूमा कुँवरले रेभलन, लोरियलजस्ता चर्चित कस्मेटिक उत्पादन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएकी थिइन्। पछि अरू धेरै उत्पादनको व्यवस्थापन र अरू काम पनि सम्हालिन्। यसमध्ये 'अब्युज प्रिभेन्स' को काम पनि थियो। उनका अनुसार यो भनेको नक्कली सामग्री बनाएर ग्राहकमाथि हुने ठगी नियन्त्रण तथा रोकथामको काम हो।
'अन्तिमको साढे एक वर्ष चाहिँ मैले अमेजनको नयाँ रिटेल कम्पनीहरू स्थापना गर्ने काम गरेँ। साउदी अरेबिया, इजिप्ट, स्वीडेन, पोल्यान्ड जस्ता मुलुकमा अमेजन विस्तार गरेँ,' उनले भनिन्।
कुँवरले अमेजनमा काम गरिरहेकै बेला सिंगापुरबाट दराजका प्रतिनिधिले उनलाई दराज नेपालको नेतृत्वका लागि प्रस्ताव गरे। उनका अनुसार अमेजनमा उनको काम निकै राम्रो भइरहेको थियो। त्यहीँ अझै माथि उक्लिने ठाउँ पनि थियो। तर पनि दराजको प्रस्ताव नकार्न नसकेको उनले बताइन्।
'मैले नेपाल छाडेको १८ वर्ष भइसकेको थियो। आफूले गर्न चाहेको काम पनि गरिरहेकी थिएँ। तर नेपालमै आफ्नो रूचि अनुसारको काम गर्न अवसर पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो। अनि मैले हुन्छ भनिदिएँ,' उनले सुनाइन्।
उसो त कुँवरले नेपाल फर्किऊँला भन्ने सोचेकै थिइनन्। तर नेपालमा सामाजिक काम गर्ने सानैदेखिको इच्छा थियो।
उनले यसमा थपिन्, 'सुरूमा अमेरिका जाँदै गर्दा म नेपाल फर्किएर केही गर्छु भन्ने सोचेकी थिएँ। तर समय बित्दै जाँदा म न यहाँको, न त्यहाँको जस्तो भएकी थिएँ। विस्तारै नेपाल फर्किएरै केही गर्छु भन्ने सोच हराइसकेको थियो। तर त्यहीँ बसेर पनि नेपालका लागि सामाजिक काम गर्न निकै रूचि थियो।'
यही रूचिले डोर्‍याएर उनले नेपालका लागि सामाजिक काम गरिरहेकी पनि थिइन्। उनका अनुसार उनले यहाँका केही बालबालिकाको शिक्षामा लगानी गरेकी छन्। २०७२ सालको भुइँचालो बेला पनि त्यहाँबाट सहयोग पुर्‍याइन्। त्यो बेला आफूहरूले एउटा संस्थामार्फत दुई सय ७५ हजार अमेरिकी डलर सहयोग गरेको उनी बताउँछिन्।
अमेरिकामै भए पनि विभिन्न सामाजिक काममार्फत नेपालसँग जोडिइरहेकी कुँवरलाई दराजको प्रस्तावले आफ्नै देश फर्किने अवसर दियो।
उनी भन्छिन्, 'यहीँ जन्मिएको, हुर्किएको, माया लाग्छ नि। परिवारसँगै बसेर आफूले सोचेजस्तो काम गर्न पाउँदा खुसी थपियो।'
दराजको प्रस्तावपछि उनी अन्तर्वार्ता प्रक्रियामा सामेल भएकी थिइन्। त्यसबाट छनोट भएपछि कुँवर ठूलो इ-कमर्शका रूपमा फैलिँदै गएको दराज नेपालको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेकी हुन्।
अमेजनजस्तो विशाल इ-कमर्श कम्पनी र विदेशमा बसेर काम गरेको अनुभव दराजसँग साट्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको उनी बताउँछिन्।
'दराज नेपालको टिम आफैंमा बलियो छ। छोटो अवधिमा दराज थुप्रै नेपालीको मनमुटुमा बसिसकेको छ,' उनले भनिन्, 'अब म आफ्नो अनुभवलाई दराजमा थपेर अगाडि बढ्छु भन्ने सोचेकी छु।'
दराज नेपालको टोलीमा सबै नेपाली कार्यरत छन्। विदेशी भनेका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक लिनो अलरिङ मात्रै हुन्। उनी केही दिनपछि सिंगापुरको दराज मुख्यालयमा क्षेत्रीय भूमिकामा जाँदैछन्। त्यसपछि कुँवरले पदभार ग्रहण गर्नेछिन्। लिनोले दराज नेपालको समूह निकै बलियो बनाएका कारण अगाडि बढाउन सहज हुनेमा उनी विश्वस्त पनि छिन्।
'तर दराजलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउने कुरामा हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ। बाहिरी मुलुकका अनलाइन बजारसँग तुलना गर्दा हामी अझै पछाडि नै छौं। इ-कमर्श मात्रै होइन, समग्र व्यवसायमा हामी पछाडि छौं। जसले गर्दा हामीले दराजमा अब झनै मेहनत गर्नुपर्छ,' कुँवरले भनिन्।
हाल दराज नेपालले ४७ भन्दा बढी सहरमा आफ्नो सेवा विस्तार गरिसकेको छ। यो सेवालाई समग्र नेपालभर विस्तार गर्न आफूले पहल गर्ने उनले बताइन्। मानिसहरूलाई चाहिने हरेक सामग्री दराजमा पाइने गरी काम गर्ने सोच उनको छ।
'कसैलाई केही चाहियो भने ए यो त दराजमा पाइन्छ भनेर जुनसुकै सामानका लागि दराजलाई सम्झिन सक्ने गरी काम गर्ने मेरो योजना छ,' उनले भनिन्।
उनका अनुसार दराजले गुणस्तरीय उत्पादन उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन पनि जोड दिनेछ। कुनै सामग्रीको सम्पूर्ण विवरण स्पस्ट देखिने गरी राखिने र तस्बिरमा देखिएजस्तै सामान उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने कोशिस गर्ने उनले बताइन्।
अनलाइनमार्फत सामग्री खरिद गर्दा उपभोक्ताबाट धेरै गुनासा आउँछन्। दराज पनि यो गुनासोमुक्त छैन। एक सामान मगाउँदा अर्कै पुगेको थुप्रै उपभोक्ताले सुनाइरहेका हुन्छन्। कुँवरले अब यस्ता समस्या हल गर्दै जाने दावी गरिन्।
'अब यस्तो समस्या दराजमा हुन दिन्नँ। यसनिम्ति हामी हाम्रा बिक्रेतालाई पनि सचेत गराउँछौं,' उपभोक्तामाझ अनलाइन बजारको विश्वास बढाउन आवश्यक सबै काम गर्ने उनी बताउँछिन्।
त्यस्तै भनेको समयमा उपभोक्तासम्म सामग्री पुर्‍याउन समेत दराजले जोड दिनेछ।
कुँवरको अनुभवमा विदेश, विशेषगरी अमेरिकाको तुलनामा नेपालको अनलाइन बजार धेरै पछाडि छ। इ-कमर्श मात्रै होइन, समग्र बजार नै पछाडि छ। अमेरिकीहरू अनलाइन किनमेलमा अभ्यस्त छन्। अनलाइनबाट सामान मगाउनुअघि सामग्रीको समीक्षा कसरी हेर्ने, कसरी किन्ने जस्ता कुरा सहज भइसकेको छ। बजार सचेत भएकै कारण बिक्रेता पनि सजग छन्।
नेपाली अनलाइन बजार यसको तुलनामा एकदमै तल भए पनि विस्तारै विकसित हुने कुँवरको विश्वास छ।
'कोभिडयता नेपालमा अनलाइन व्यवसाय फस्टाउन थालेको छ। अहिले त हाम्रो आमाबुवा उमेर समूहकाले पनि अनलाइनबाट सामान अर्डर गर्न थाल्नुभएको छ। यो निकै ठूलो परिवर्तन हो,' उनले भनिन्।
काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य पसल-बजार शनिबार प्रायः बन्द हुन्छन्। धेरै मानिस साताभरि व्यस्त हुने भएकाले किनमेलको समय त शनिबारै मिल्छ। अर्को दिन निकालेर किनमेलका लागि हिँड्न मुश्किल हुन्छ। यसले गर्दा पनि यहाँ अनलाइन बजारको आवश्यकता बढ्दै गएको महसुस उनले गरेकी छन्।
अनलाइन बजारको माग, आवश्यकता र उपयोगिता बढ्दै गए पनि यसबारे सरकारको स्पस्ट नीति र सहयोग नहुँदा अप्ठ्याराहरू भने सिर्जना हुने उनी बताउँछिन्।
'यहाँ मैले मात्र सबै कुरा राम्रो गर्छु भन्न सकिँदैन। अनलाइन बजारमा अझै धेरै चुनौती छन्,' उनले भनिन्, 'जस्तै मैले छिटो डेलिभरी गर्छु भनेँ। तर यसका लागि बाटो राम्रो र सहज हुनुपर्छ। नभए मैले चाहेर मात्र सम्भव हुँदैन।'
दराजले अहिले 'रिब्रान्डिङ' पनि गर्दैछ। दराजले नयाँ शैलीमा काम थाल्नु र कुँवरले यसको नेतृत्व सम्हाल्नु सँगसँगैजस्तो भएको छ। यसले गर्दा दराजको सेवालाई थप मजबुत बनाएर अघि बढ्न आफूमा चुनौती थपिएको उनी बताउँछिन्।
'रिब्रान्डिङलाई सामान्य तरिकाले बुझ्न एउटा बच्चा ठूलो भएको अवस्थासँग तुलना गर्छु म। यो हाम्रो व्यक्तित्व परिवर्तन भएजस्तै हो। हामी झन् परिपक्व भएका छौं, यही प्रमाणित गर्न हामी रिब्रान्डिङ गर्दैछौं,' उनले भनिन्।
दराजले नयाँ लोगो सार्वजनिक गरिसकेको छ। अब दराज बजारमा विश्वका अन्य देशका उत्पादनसँगै हाम्रा स्थानीय उत्पादनलाई पनि जोड दिने उनको भनाइ छ।
यसबाहेक कुँवरले सामाजिक कामको दायरालाई थप फराकिलो बनाउने सोचेकी छन्। सामाजिक कामको प्रेरणा आफ्नी आमाबाट पाएको उनी बताउँछिन्।
'मेरी आमा गृहिणी हुनुहुन्छ। घरको कामसँगै सामाजिक काममा पनि उहाँको निकै रूचि छ। हामीले अरूका लागि पनि केही गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यसैले पनि ममा सहयोगको भावना आइरहन्छ,' उनले भनिन्।
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ९, २०७८, १९:१५:००